gini bu USB 3.0 HUB? | Huachuang Elektrọnik
Ogwe USB 3.0
3.0kpụrụ USB 3.0 nke ewepụtara na 2008 kwere nkwa na ọnụego data gbalitere n'ụzọ dị elu ma e jiri ya tụnyere USB 2.0 nke teknụzụ teknụzụ. N'ihi eziokwu ahụ bụ na USB 3.0 dakọtara na teknụzụ ndị gara aga, ngwaọrụ ochie ka nwere ike iji eriri USB 3.0 ọhụrụ.
Nchikota nke uru nke USB 3.0
10x gbara ọsọ karịa USB 2.0
Nweta ala dakọtara na USB 2.0 ngwaọrụ
Kedu ihe kpatara eji etinye USB 3.0 USB?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji jiri eriri USB 3.0. Otu n'ime ihe ndị ahụ kpatara ya bụ na ị ga-eche maka ọdịnihu nke teknụzụ. N'oge na-adịghị anya, ngwaọrụ njedebe nke na-akwado ọkọlọtọ USB 2.0 ga-apụ n'anya n'ahịa. Nke a bụ ihe kachasị mkpa mgbe ị tụlere na etolitelarịrị ihe owuwu, nke a na-akpọ USB 3.1 (SuperSpeed ​​+). USB 2.0 bụ nke a na-agbada ma nwee ike ileghara ya anya, ebe eriri USB 3.0 nwekwara ike ijikwa ngwaọrụ njedebe na teknụzụ 2.0 na agbanyeghị. Ọ bụrụ na azụta ngwaọrụ ngwụsị ọhụrụ nwere njikọ USB, a na-enyekarị ya USB USB.
Ebe nchekwa USB 3.0 dị ugbu a
Ọ bụrụ na ịzụta eriri USB 2.0 ma nwee ngwaọrụ ngwụcha nke na-akwado USB 3.0, ịnwere ike iji ha, mana ị ga - eme enweghị nnukwu ọsọ USB USB. Nke a na-eme ka enweghị ọgụgụ isi na teknụzụ ma ọ bụ nke akụ na ụba. Ọ bụrụ na a ga-etinye ihe ndozi n'ime akụrụngwa dị adị, a na-atụ aro nhọrọ nke USB 3.0 nke ukwuu.
Kedu ọsọ nnyefe data site na eriri USB 3.0?
Ntughari ego nke eriri USB 3.0 dabere na otutu ihe. Iji mezuo ọsọ kachasị ekwe omume maka ịnyefe data, ọ dị mkpa na ngwa na ngwaọrụ niile dị na ya na-akwado ọkọlọtọ USB 3.0. Dịka ọmụmaatụ, iji gbaa draịvụ mpụga iji nweta arụmọrụ kacha elu n'oge ede ma na-agụ ohere, ọdụ ụgbọ USB dị na isi, eriri USB na draịvụ mpụga ahụ ga-abụrịrị nke ọma maka USB 3.0. Enwere ike ịhụ nke a site na ihe ndị na-acha anụnụ anụnụ dị na plọg na oghere USB.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m jikọọ eriri USB 2.0 na ọdụ USB 3.0?
Na ụkpụrụ, ọ nweghị ihe ọ bụla ga - eme nke ga - emebi USB USB, ngwaọrụ njedebe ma ọ bụ isi ihe. Agbanyeghị, ị ga-ebi oke osisa ma ọ bụrụ na otu ihe akpọtụrụ anaghị akwado USB 3.0.
Enwere eriri USB 3.0 na-enye ọrụ dịgasị iche?
Enwere USB USB dị otú ahụ n'ezie. Versionsdị dị iche iche dị. Fọdụ na-akwado WLAN, ndị ọzọ nwere igwe na - agụ kaadị ka agbakwunyere ma yabụ ọ bụghị naanị ọrụ dịka isi ihe maka njikọ dị n'etiti ngwaọrụ USB, kamakwa dị ka ebe nchịkwa maka ịgụ kaadị SD.